बुद्ध एयरको जहाज विमानस्थलमा दुर्घटना, जहाजमा भयो क्षति – live 60media
बुद्ध एयरको जहाज विमानस्थलमा दुर्घटना, जहाजमा भयो क्षति
November 25, 2021 admin	0 Comments
काठमाडौ । नेपालगन्ज विमानस्थलमा बारम्बार दुर्घटना हुन थालेपछि बुद्ध एयरले विमानस्थल कार्यालयलाई विशेष आग्रह गरेको छ । विमानस्थललाई सुरक्षित बनाउन माग गर्दै बुद्ध एयरले आग्रह गरेको हो । वुद्ध एयरको अफिसियल फेसवुक पेजमा एक सूचना जारी गर्दै भनिएको छ, हिजो बुधबार २४ नोभेम्बरका दिन काठमाडौंबाट नेपालगञ्जको उडान नं।
४०७, कल साईन ढल्(ब्व्ह् जहाज अतवरण गर्ने क्रममा स्यालसँग ठो’क्कि’न पुग्दा जहाजमा सामान्य क्षति पुगेको छ । चालक दलसहित सबै यात्रुहरु सुरक्षित छन् । नेपालगञ्जमा रहेका यात्रुहरुलाई लिनका लागि काठमाडौंबाट छुट्टै खाली जहाज पठाएका थियौं ।
नेपालगञ्ज विमानस्थलमा यस किसिमको दुर्घटना पहिला पनि भएको र हाल बारम्बार देखिएको हुँदा सम्बन्धित सबै निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । भविष्यमा यस किसिमको दुर्घटना दोहरिन नदिन सबै उपायहरु अवलम्वनका लागि पनि अनुरोध गर्दछौं ।
केही दिन अघि तीनवटा बँदेलसंग विमान ठो’क्कि’एको घटना सेलाउन नपाउँदै बुद्ध एयरको विमान एक जनावरसँग ठो ‘क्कि’ एको छ । बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मधुसुदन न्यौपानेकाअनुसार काठमाडौंंबाट छुटेको विमान बुधबार साँझ ७. १ बजेतिर नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो ।
अवतरणका क्रममा धावन मार्गमा स्यालको बच्चाजस्तो देखिने जनावरसँग ठोक्किएको डीएसपी न्यौपानेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार चालकदलसहित सबै यात्रु सकुशल छन् । विमानस्थलमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा सानो एउटा स्यालको बच्चाजस्तो देखिने जनावरमा ठ ‘क्क’र खाएर अवतरण भयो । अलिकति विमानको अगाडिको नोज गेयरमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तो अप्रिय घटना केही भएको छैन, डीएसपी न्यौपानेले भने ।
विमान कुन जनावरसँग ठो क्कि एको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । तर, विमान चालकले स्यालजस्तो देखिने जनावर भएको बताएको विमानस्थलमा खटिएका एकजना प्रहरी अधिकारीले बताए । ती अधिकारीकाअनुसार धावनमार्गमा रगतसँगै ठो क्कि एको जनावरको शरीरको केही भाग देखिएको थियो । पछि धावनमार्गलाई पानीले पखालिएको उनले बताए ।
← देखेको 30 सेकेण्ड फोटो छोई ॐ लेखि शेयर गरौं तपाईले सोचेको काम बन्ने छ।
कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुने मिति तोकियो, कहिले हुन्छ ? →